SHURUUCDA IYO QAANUUNKA / Xeerarka-articles
La cusbooneysiiyay: 18/11/2020
Waxa loo qeybiyay sedex qeybood wadanka Talyaniga tasoo lagu tix galinayo goob walba iyo xalkeda sida uu yahay, waxa uu so baxay DPCM kan 3da nofeembar waxa una hir galaya 6da nofeembar ilaa 3da disheembar 2020
EERIYADA JALAHA AH
EERIYADA ORANJIGA AH
Mala wareegi karo sacada 22:00 ilaa 05:00 subaxnimo sabab la’aan, shaqo,caafimaad iyo sabab muhim ah cadena wadato. Waxa lagaa codsanaya in aadan hoygaada kaso bixin sabab la’an.
Waxa la xiraya Mallka laga adegto malmaha feestooyinka iyo (sabtiga iyo axada) marka laga reebo farmashiyaha, gobaha lagiu iibsho dawooyinka dabiiciga ah, subermaarketka, tabakaayada iyo kuwa jornalada iibiyo ee ku dhex yaalo mallka.
Xiris madxafyada iyo gobaha lamidka ah.
Wax barashada waxa laga dhigay online adigo gurigaga jooga marka laga reebo kuwa nafada ah ee qaba baahida gaarka ah ama kuwa eey qasab ku tahay iney isticmalan qalab yaalo iskuulka oo kaliya, Waxa xiran jamacadaha dhaman.
Waxa xiran dhaman xarumaha qamaarka, kuwa bararka yaal ama kuwa tabakayada yalaba.
Waxa la isticmaalo kara 50% gudaha gaadiidka bulshada marka laga reebo kuwa iskuulada.
Waxa la xiraya maqayadaha iyo bararka 18:00 lakin ilaa 22:00 walaso gali kara lagana qadan kara . Dalabka eey ayaga guryaha geynayan waqti um,a go’ana.
Waxa xiran Jiimka, shanemadoyinka, dabasha yo tiyaatarka. Waxa furnanayo gobaha ciyaraha
La iskuguma kala socon kro gudaha , sida komuun ka ad degantahay oo aad ka baxda lama ogola, sabab la’an, waxad ka bixi karta markad shaqo ama caafimad ama sabab muhiim ah u socotid o caden wata.
Waxa lagaa codsanaya in aadan hoygaada kaso bixin sabab la’an, kana bixin Komunka ad dagantahay.
Waxa xiran dhaman barka iyo maqyadaha 7da malmoodba, waxa ka qadan karta ilaa 22:00 guriga oo eey kugu kenana waqti uma go’ona.
Wax barashada waxa laga dhigay online adigo gurigaga jooga marka laga reebo kuwa nafada ah ee qaba baahida gaarka ah ama kuwa eey qasab ku tahay iney isticmalan qalab yaalo iskuulka oo kaliya, dugsi dhexe iyo kan sareba.
Jamacadaha waa xiran yihin marka laga reebo kuwo gaar ah oo eey qasab tahay iney tagan.
Waxa xiran Jiimka, shanemadoyinka, dabasha yo tiyaatarka
Waxa furnanayo gobaha ciyaraha
Waxa xiran dhaman isku soocodka 7da maalmood ee isbuuca mana laga bixi karo guriga sabba la’an caafimaad shaqo iyo adeeg wixi ka badan wa inad caden wadata.
Dhaman dukamada wa xiranyihin mark alaga rebo kuwa cunada iyo dawooyinka.
Wa furnan karan farmashiyaha, tabakayada, suberkmarketka, jornalaha iyo dawodhaqamedka
Xarumaha jimicisiga wa xiranyihin
Waxbarashada waa online dugsiga dexe iyo kan sare iyo mana la aadi karo goobta wax barasho.
Waxa furnanayo kaliya kan ilmaha yar yar lagu hayo, kan kowad iyo dusiga hoose.
Waxa xaniban dhaman ciyaraha marka laga rebo kuwa ka diwan gashan xiririka ciyaraha ee CONI iyo CIP, dhaman goobaha ciyaraha wa iran yihin waxa la ogolyahay kaliya midka aad gurigada ku samesato ama orodka oo aad ilaaliso kala foganshaha qofka kale.
Waxa xiran dhaman madxafyada iyo goobaha lagu ilaliyo alabaha qadiimiga ah, waxa kaloo xiran shaneemada iyo tiyaatarada iyo dhaman goobaha la iskugu imankaro.
Gaadiidka dad weynaha waxa raaci karo inta uu qaado 50% kaliya markiba marka laga reebo kuwa iskuulada.
ISKU SOCODKA. 6 WAXAYABOD OO AAD U BAHANTAHAY
ISKU SOCODKA MA IN AN SABABEYAA? MA QASABAA IN AAN WARQAD WATO? Laga bilabo 5ta ilaa 22 fiiski looma bahno warqad. Laga bilabi 22 ilaa 5ta subaxnimo wa qasab in aad cadesa sababta iyo gobta aad u socoto. Ma aadi kara si anu cawiyo saxib ama qaraabo anan isku filneen? Haa, inta maalinki ah ilaa 22ka fiidki wa adi karta sabab la’an, lakin habenki 22 ilaa 5 subaxdi wa inad warqad wadataa. Wa kala tagnay ama is furnay, ma aadi kara caruurteyda? Haa, waa la ogolyahay waqti walba waalidka iyo caruurta in eey kulmaan sabab la’aan , hadey noqoto isla magalada ama xita Kamuunkaga banaankiisa, adigo ilaalinayo sacada. Mala aadi kara xarumaha cibaadada nuuc walba? Haa, sacadaha 5ta ilaa 22 fiidki. Hadi aan ku noolahay komuun kuna shaqeyo midkale ma aadi kara “horay iyo gadalba”? Haa Qofka joogo meel ka baxsan hoygiisa maloo ogolyahay in uu kuso labto? Haa.
ISKU SOCODKA MA IN AN SABABEYAA? MA QASABAA IN AAN WARQAD WATO? Sacada 5ta ila 22 loomabaahno wax cadeen ah ama sabab ah, Wixi ka danbeyo sacada habenki ee laba iyo labatanka lama bixi karo sabab la’aan mana iskaga kala gooshi kartid kamuunkaga iyo midkale sabab la’aan. Waa qasab in aad cadeesa goobta aad u socoto iyo sababta warqad ahaan hadi aad soo dabacatayna wa kasi wanagsan hadi adan wadana askariga ku qabto ayaa ku siinayo oo aadhortisa ku buux buuxineysa. Ma aadi kara si anu cawiyo saxib ama qaraabo anan isku filneen? Haa, wax cadeen ah hadii aad heysid shurud kale ma jirto. Wa kala tagnay ama is furnay, ma aadi kara caruurteyda? Haa, waa la ogolyahay waqti walba waalidka iyo caruurta in eey kulmaan sabab la’aan , hadey noqoto isla magalada ama xita Kamuunkaga banaankiisa, adigo ilaalinayo sacada. Mala aadi kara xarumaha cibaadada nuuc walba? Haa, sacadaha 5ta ilaa 22 fiidki laga bilaabo sacadaha 22 ilaa 5ta laa bixi karo xita eeriyada gaduudan. Hadi aan ku noolahay komuun kuna shaqeyo midkale ma aadi kara “horay iyo gadalba”? Haa, wase hadi ad u socoto shaqo eey tahayna shaqo adan guriga kaso qaban karin Qofka joogo meel ka baxsan hoygiisa maloo ogolyahay in uu kuso labto? Haa, lakin wa kaliya marka ugu horeyso wixi ka danbeyo qaa qasab in aad u baxda kaliya caafimaad, shaqo ama xaalad gaar ah oo caden wadata, hadi kale waa ganaax, waxa uso bixi karta oo kale adeega guriga ama in aad u socoto goobaha furan sida Boostada iwm.
ISKU SOCODKA MA IN AN SABABEYAA? MA QASABAA IN AAN WARQAD WATO?
Waa qasab inaad sababeysa mar wlaba iyo saacad walba socodkaga , warqadada wado hadaad awoodo ama weytdi askarta ku istaajiso hortoodana ku buux buuxi sababtana cadeen u yeel.
Ma aadi kara si anu cawiyo saxib ama qaraabo anan isku filneen?
Haa, waase hadi eey tahay baahi dhaba
Wa kala tagnay ama is furnay, ma aadi kara caruurteyda?
Haa, waa la ogolyahay waqti walba waalidka iyo caruurta in eey kulmaan sabab la’aan , hadey noqoto isla magalada ama xita Kamuunkaga banaankiisa, adigo ilaalinayo sacada.
Mala aadi kara xarumaha cibaadada nuuc walba?
Haa, shuruuda kaliya ee ku xiran wa in eey ilaaliyaan dhaman sharciga kala fogaanshaha ugu yaraan 1 mitir iyo afka oou xirnaado dhaman inta gudaha lagu jiro ama banaankaba, waxad aadi karta goobta cibaado ee kugu dhaw hoygada hadi eey qasab noqoto ama cibaado wadareed tahay waaka bixi karta komunkaga si aad u gaarto goobta cibaado, fadlan ilaali shuruucda dhaman.
Hadi aan ku noolahay komuun kuna shaqeyo midkale ma aadi kara “horay iyo gadalba”?
Haa, wase hadi ad u socoto shaqo eey tahayna shaqo adan guriga kaso qaban karin
Qofka joogo meel ka baxsan hoygiisa maloo ogolyahay in uu kuso labto?
Haa, lakin wa kaliya marka ugu horeyso wixi ka danbeyo qaa qasab in aad u baxda kaliya caafimaad, shaqo ama xaalad gaar ah oo caden wadata, hadi kale waa ganaax, waxa uso bixi karta oo kale adeega guriga ama in aad u socoto goobaha furan sida Boostada iwm.
Sharciga cusub ee isku socodka ka bilabayo 18ka Meey